DABAGALKA WARKA: Loolanka Xildhibaano raadinta Puntland oo xoogeystay & Mase la gaaray xiligii ay Isimadda Puntland ay xuli lahaayeen Xildhibaano garowsan waajibaadka loo igmaday ee Puntland? – Puntlandtimes
DABAGALKA WARKA: Loolanka Xildhibaano raadinta Puntland oo xoogeystay & Mase la gaaray xiligii ay Isimadda Puntland ay xuli lahaayeen Xildhibaano garowsan waajibaadka loo igmaday ee Puntland?
March 1, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Loolanka loogu jiro ka mid noqoshada baarlamaanka Puntland ee dooran doona Madaxda maamulkaas sannadka 2019-ka ayaa si xawli ah uga socda magaalooyinka Puntland, waxaana dhacaya kulamo u dhaxeeya jifo-hoosaadyada beelaha leh kuraasta mataalada golaha Wakiilada, kuwaas oo ay ku kala saarayaan xubnaha u sharaxan Xildhibaanimada baarlamaanka Puntland ee sannadka nagu soo aadan.
Mudo xileedka baarlamaanka Puntland ee hadda jira ayaa ku e’eg dhamaadka bisha October 2018-ka, waxayna Xildhibaanada joogaa dadaal xoog badan ku bixinayaan qaar badan oo kamid ah sidii ay ku soo laaban lahaayeen, iyagoo adeegsanaya wax kasta oo ay awoodaan.
Si weyn ayaa loogu loolamayaa sidii loo kala heli lahaa kuraasta golaha baarlamaanka, waxaana gobalada qaarkood goor horeba la ogaaday xubnaha haysta taageerada Isimadooda rasmig ah, kuwaas oo ay goor horeba bilaabeen musharaxiintu in ay xariiro la sameeyaan.
Doorashada 2019-ka ayaa ka xiiso badan tii dhacday sannadkii 2014-kii oo lagu kala guuleystay Hal cod oo kaliya, waxaana doorashadan is muujiyey xubno badan oo katirsanaa Xukuumadii xilka lagala wareegay doorashadii hore ee uu hogaaminayey Cabdiraxmaan Max’ed Faroole.
Isimada dhaqanka ee leh saxiixyada u dambeeya ayey saaran tahay shaqo adag oo u baahan in ay aad uga taxadaraan, marka laga hadlayo cidda loo soo dirayo mataalada masiirka Shacab, waxaana sannadkan aad usharaxan dhalinyaro badan oo raadinaya helitaanka Kuraasta baarlamaanka.
Isimaddu waxay hadda ciyaarayaan doorkooda ku aadan sidii loo heli lahaa dad ku kala baxa Aqoonta, marka laga yimaado qeybsiga hoose ee jifooyinkooda, waxaana muuqata saameyn balaaran oo ay Dhalinyaradu ku leeyihiin soo bixitaanka Kuraasta baarlamaanka ee Puntland.
Kulamo ku saabsan sidii loo abuuri lahaa madalo u qareema Dhalinyaradda iyo Haweenka ayaa goor horeba ka bilowday gudaha Puntland, waxaana dhalinyaradu ay yihiin kuwa aan awood u laheyn in ay helaan lacagaha fara badan ee mararka qaarkood loo adeegsado soo bixitaanka Xildhibaanka kamid noqonaya golayaashan.
Sidaas oo kale beesha Caalamka iyo Hay’addaha caalamiga ah qaarkood oo saameyn ama door ku yeelan doona doorashooyinka dhaw ayaa lafilayaa in ay xooga saaraan sidii Isimadda loogu cadaadin lahaa in ay dhalinyaradda & Haweenka siiyaan mudnaanta koowaad, si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay qeyb ka yihiin dhinacyadan oo dhan.
Loolanka Madaxtinimada Puntland ayaa bar bilow u tahay soo bixitaanka Xildhibaanada, waxaana beel kasta ay wajahaysaa caqabado is heysi sal u yahay, maadaama ay jiri karaan shaqsiyaad badan oo damaca siyaasiga ah ee Kursiga Xildhibaanimo ku weyn yahay, kuwaas oo mar kasta qaadaya talaabada ay doonayaan sidii ay hamigooda ku gaarsiin lahayeen Aqalka Wakiilada.
Tiradda guud ee baarlamaanka Puntland ayaa ah 66 xubnood, waxaana loo qeybsadaa habka gobaleysiga oo salka ku haya nidaamka beelaha, waxaana gobalada qaarkood ay leeyihiin Aqbaliyadda golaha wakiilada marka la eego tiradda ay gobaladaas haystaan.
Codadka ugu badan ee golaha Wakiiladdaas ayaa ka yimaada gobalada Sool, Cayn, Barri iyo Karkaar oo isku darka guud ay ka yimaadaan mudanayaal gaaraya 38 Xildhibaan, taas oo ka dhigan in gobaladaas ay leeyihiin 57% tiradda guud ee golaha baarlamaanka Puntland.
Kuwa hada jooga hal qof yaanu kusuu noqon barlamanka,waayo magaranayaan shaqada barlamaan